Kpachara Anya Banyere PayPal Ndenye Ndebanye aha Akwụkwọ ọnụahịa ojoro | Martech Zone
Kpachara Anya maka Usoro Ndenye Akwụkwọ Ndebanye aha PayPal
Dịka azụmahịa, ọ na-atụkarị m anya ọtụtụ ebubo sitere na ya nke juru m anya. N'ime ụwa nke ngwa dị ọnụ ala, ndenye aha obere akwụkwọ, yana plethora nke usoro ịkwụ ụgwọ, ọ ga-abụ ihe na-enye ezigbo ego ka ọ bụrụ onye ịntanetị scammer ụbọchị ndị a.
Ezigbo enyi m, Adam, zigara m aghụghọ aghụghọ nke ụtụtụ a nke ọ natara maka nke ya Estlọ Ahịa CRM. N'adịghị ka email phishing poofed, ebe onye na-ezipụ fakes ha na-eziga adreesị ozi-e, onye a na-eziga site na ntinye akwụkwọ PayPal - onye ziri ezi ziri ezi.
Ọ gwụla ma ị nwere ntọala nzuzo na ngalaba gị, onye ọ bụla nwere ike ịme a Whois lelee ma chọpụta adreesị email gị na ụbọchị njedebe nke ndebanye aha gị. Iji PayPal, ha mepụtara akwụkwọ ọnụahịa n'ezie ma zigara gị sistemụ ha. N'okwu a, ha gosipụtara akwụkwọ ọnụahịa ahụ na GoDaddy - onye na-edeba aha.
Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu ụlọ ọrụ, nke a nwere ike ịgafe ma kwụọ gị ụgwọ n'agbanyeghị na ọ bụghị ọrụ ndebanye aha ngalaba ahụ. Mgbe Adam pịrị na, ọ bụ adreesị ozi-e Russia ka edobere maka onye nnata. Ọ kọọrọ ya PayPal ma nwee olile anya na ha mechiri, mana nke a ka na-eweta nsogbu ebe ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa ezigara site na ọrụ n'ezie.
Ọ dị ka enwere ohere dị ukwuu ebe a maka ọrụ dị ka PayPal iji mepụta nkwekọrịta n'etiti onye na-azụ ahịa na onye na-ere ere na ha maara ibe ha n'ezie ma nwee mmekọrịta tụkwasịrị obi PayPal kama PayPal na-ekwe ka onye ọ bụla ziga akwụkwọ ọnụahịa onye ọzọ
Tags: ịgba ụgwọonye na-edeba aha ngalabaakwụkwọ ọnụahịa emailPaypalakwụkwọ ọnụahịa paypal
Nchịkọta saịtị Alexa.com: Atụmatụ ọhụrụ Nye Ndị na-ere ahịa Mma Nkata nke Ọchụchọ na Ohere Ọdịnaya, n'efu